Nsonaazụ Egwuregwu Social Media na-abụghị nke ọrụ
Anyị esorola ọtụtụ ndị na-anaghị akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ ọ na-adịkarị ka e nwere ụdị mmefu ego abụọ anaghị akwụ ụgwọ… efu ma ọ bụ tọn. Ma ha abụọ, a na-eju m anya na otu mmadụ ole na ole tinyegoro ịkparịta ụka n'socialntanet na mgbasa ozi mmekọrịta ha na ngwakọta ha. Ndị ndu na-anaghị akwụ ụgwọ bụ ndị isi na ịkparịta ụka n',ntanet, mana ọ dịbeghị ka ha achọpụtala ohere iji bulie netwọkụ ahụ n'ịntanetị.
Nnyocha sitere na Report Reporting Social Networking Benchmark nke 2012 na-egosi na Ndị na-akwụghị ụgwọ na-aga n'ihu na-eto eto ọnụnọ ha na netwọkụ mmekọrịta na-enweghị nnukwu oge ma ọ bụ ego. Ihe omimi miri emi banyere otu ndi na-abaghi ​​uru na-enweta nsonaazụ ndi a ekpughewo ihe omuma bara uru.
Ọ bụrụ na ọnụọgụgụ bara ụba nke a ga-eti mkpu site n'elu ụlọ, ọ bụ na data ahụ na-egosi na Facebook dị ka nwere ike ịdị $ 3.50 mana ego a rụpụtara bụ $ 214.81. Nke ahụ bụ ezigbo mma nloghachi na ego. Igodo nke nkwenye a na-enweghị atụ bụ na ndị na-anaghị akwụ ụgwọ na-agbanwe ndụ ma na-enwekarị akụkọ ịtụnanya ị ga - ekekọrịta into na-enweta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-ekwughachi akụkọ ahụ ma mee ka ya na ndị ọzọ ga - aza.
Tags: benchmark akụkọabụghị uruabughi urubenchmark na-abụghị ọrụelekọta mmadụ media